TOP-ミャンマー - 外食・宿泊 特定技能VISA登録支援機関 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会
ရားမျှတပြီး သင့်လျော်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးပါမည်။
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊လူ့အဖွဲ့အစည်း ထူထောင်ရေးကို အကျိုးပြုပါမည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှူအတွက် အခြေခံ ဖြစ်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါမည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လုပ်သားဦးရေ ဆက်လက်ကျဆင်းနေမည်မှာ မလွဲမသွေပင်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာကို အသုံးပြု၍လုပ်အားခြွေတာမှုနှင့်လုပ်အားခြွေတာရေးတို့သည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော်လည်း နေ့စဉ်လူနေထိုင်မှူဘဝတွင်လူသားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မပါဝင်၍မရသေးသောလုပ်ငန်းများစွာ ရှိပါသေးသည်။
တည်းမှာပင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ကြိုးစားသွားမည်။
အကိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီး၍ ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ပုံရိပ်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေပါသည်။
ဤအသင်းအဖွဲ့၏လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်၊ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရုံသာမက နိုင်ငံခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်လည်းမူဘောင်စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ထက်မြတ်၍ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိ သော နိုင်ငံရပ်ခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မှရွေးချယ်ခံရသောကမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်သည်ဟု ခံစားမိပါသည်။
ကုမ္ပဏီများနှင့် အလုပ်ရှာဖွေနေသူများအတွက် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုသင်တန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
အတွက် အလုပ်ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု။
ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်သင်သင်တန်းသားဟောင်းများကဲ့သို့သောဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်ပြောင်းလိုသူများမှနိုင်ငံသား၊ကျားမ၊အတွေ့အကြုံ၊အသက်၊ဂျပန်စာအရည်အချင်းအစရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှလူသားအရင်းအမြစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။နိုင်ငံရပ်ခြားဂျပန်ဘာသာကျောင်းများနှင့်စေလွှတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍နိုင်ငံရပ်ခြား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များမှ မိတ်ဆက်မှုများကိုလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပါမည်။
ဝန်ထမ်းခေါ်ဆိုမှူတောင်းဆိုချက်ရရှိခဲ့ပါလျှင် သင်ငှားရမ်းလိုသော နိုင်ငံသား၊ အသက်၊ ကျား၊ မ၊ နှင့်အတွေ့အကြုံ၊အရည်အချင်းလုပ်ငန်းစဥ်အချိန်ဇယားအစရှိသည်တို့ကိုအသေးစိတ် မေးမြန်းပါမည်။ ထို့အပြင်အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုလည်းအသေးစိတ်မေးမြန်းပါမည်။
ဝန်ထမ်းခေါ်ဆိုမှူတောင်းဆိုချက်ရရှိခဲ့ပါလျှင် သင်ငှားရမ်းလိုသော နိုင်ငံသား၊ အသက်၊ ကျား၊ မ၊ နှင့်အတွေ့အကြုံ၊အရည်အချင်းလုပ်ငန်းစဥ်အချိန်ဇယားအစရှိသည်တို့ကိုအသေးစိတ် မေးမြန်းပါမည်။ ထို့အပြင်အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကိုလည်း အသေးစိတ် မေးမြန်းပါမည်။
အလုပ်ရပြီးနောက်ဗီဇာလျှောက်လွှာ တင်ခြင်းကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခြင်း
ဗီဇာရရှိပြီးနောက်မှ အလုပ်ဝင်သည်အထိ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေး
နေထိုင်ခွင့်ကတ်အသစ်ထုတ်ပေးပြီးနောက်၊လက်ရှိအလုပ်မှအလုပ်ထွက်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှု၊လုပ်ငန်းခွင်အသစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုနှင့်နေထိုင်ရာနေရာအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
TOKUTEIGINO ဝန်ထမ်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း
JFBFEသည်တရားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသော မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုအဖွဲ့အစည်း (TOKU19‐002720)ဖြစ်သည်။အဓိကအားဖြင့်စားသောက်ဆိုင်စားသောက်ကုန်နှင့်ဘိုးဘွားရိပ်သာ
ိုင်ငံများ- အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ မြန်မာ၊ ရုရှား၊ ကိုရီးယား၊ နီပေါ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ဘင်္ဂါလီ၊ စပိန်
ပညာသင်ကျောင်းသား၊ နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်သားး၊ work visa၊ မိသားစုနေထိုင်မှု၊Tokuteikatsudouဗီဇာ ၊Working holidayဗီဇာများစသည်ဖြင့် ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများအား VISA လျှောက်ထားခြင်းစသည့် လက်ရှိနေထိုင်မှုအခြေအနေမှ ပြောင်းလဲလျှောက်ထားမှူများကို လက်ခံပါသည်။.
ကြပ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းကိုယ်ကိုတိုင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သောစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီအတွင်းတာဝန်ခံမန်နေဂျာလူတစ်ဦးကိုခန့်အပ်၍၊ဗီဇာတာဝန်ခံနှင့်အလုပ်သမားရေးရာပံ့ပိုးမှူတာဝန်ခံအနေဖြင့်ကြီးကြပ်ရေးတို့ကိုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သော စနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ပါမည်။
လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာမေးပွဲအတွက် လျှောက်လွှာတင်ခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင် စားသောက်ကုန် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုသင်တန်းများနှင့် အစမ်းစာမေးပွဲသင်တန်းများပို့ချခြင်းးများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အွန်လိုင်းနှင့် သက်မွေးဝမ်းသင်တန်းကျောင်းများသို့လည်း သွားရောက်လေ့လာပါသည်။
အလုပ်အကိုင် မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲ (အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်)
အကိုင်မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲများကိုကျင်းပပါသည်။WorkVisaဖြင့်အလုပ်ရရှိရန်အခက်အခဲရှိသောကျောင်းသားများမှTokuteiginouဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေသောကျောင်းသားအရေအတွက်များပြားလာပါသည်။Tokuteiginouစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းနည်းလမ်းနှင့်ကုမ္ပဏီများမှအလိုရှိသောအရည်အချင်းများကို နားလည်လွယ်သောပုံစံဖြင့် ရှင်းပြပါသည်။
Tokyo Culinary and Confectionery Arts Academy, Akahori College of Confectionery, Hattori Nutrition College, Tokyo Bell Epoch Confectionery Cooking College, Waseda Bunri College of Arts & Sciences, Tokyo Global College, Japan International Technical College,Tokyo Institute of Tourism,etc..
KAWAKAMI SHINICHIRO(Representative Director ,SG GROUP )
Yamanda Toshiyuki (Representative Director, Yoronotaki Co., Ltd.)
Takino Takashi (KOURYUU LANGUAGE SHCOOL in Yangon, Myanmar management / Lions club Yangon representative)
Inoue Yoshiki (Senior Managing Executive Officer, Tsunagu Marketing Co., Ltd.)
Kagawa Yoko (Merosu Language School)
Japan Food&Beverage Foreign Employment Association Division
Japan Food&Beverage Foreign Employment Association Tokyo Office
Japan Food&Beverage Foreign Employment Association Osaka Office
Japan Food&Beverage Foreign Employment Association Fukuoka Office
JFBFE YANGON OFFICE IN MYANMAR
Japan Food&Beverage Foreign Employment Association Yangon Office in Myanmar
11F. DagonTower. Shwegondin Road.Yay Tar Shay Ward,Bahan Tsp,Yangon,Myanmar